Tag: qanacsanaanta macaamiisha | Martech Zone
Tag: qanacsanaanta macmiilka
Waxaan wadaagnaa waxoogaa yar oo ku saabsan soo iibsiga laakiin kuma filna ku haynta macaamiisha. Istaraatijiyadaha suuq-geynta weyn uma sahlana sida darawalnimada marba marka ka dambeysa loo sii wado, sidoo kale waxay ku saabsan tahay wadista hoggaanka saxda ah. Haysashada macaamiisha had iyo jeer waa qayb yar oo ka mid ah kharashka soo iibsashada kuwa cusub. Markii uu faafay, shirkaduhu way foorarsadeen umana ayan xanaaq badnayn sidii ay ku heli lahaayeen badeecooyin iyo adeegyo cusub. Intaa waxaa sii dheer, shirarka iibka qofka iyo shirarka suuqgeynta ayaa si weyn u carqaladeeyay xeeladaha wax ku iibsiga ee shirkadaha badankood.
Talaado, Oktoobar 8, 2019 Talaado, Oktoobar 8, 2019 Douglas Karr
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ganacsiga cusub ama aasaasiga ah waa hubinta inay helaan dakhli isdaba joog ah. Macno malahan ganacsiga aad kujirto, soo celinta macaamiisha waa hab aad ufiican oo lagu dhiso dakhli xasiloon. Qeyb dabiici ah oo tan ka mid ah si kastaba ha noqotee, waa in macaamiisha ay lumi doonaan waqti ka dib si ay u cunaan. Si aad u dheelitirto luminta xawliga, ganacsigu wuxuu sameyn karaa laba shay: Soo hel macaamiil cusub Dhig xeelado si aad dib ugu guuleysato kuwii hore. Halka labaduba ay yihiin
Sida Loogu Farxiyo Macaamiishaada Markay Soo Saaraan Cusboonaysiin Weyn Codsigaaga
Sabtida, Juun 10, 2017 Jeff Kerr
Waxaa jira xiisad dabiici ah oo ku saabsan horumarinta wax soo saarka u dhexeeya hagaajinta iyo xasilloonida. Dhinaca kale, adeegsadayaashu waxay filayaan astaamo cusub, shaqeyn iyo xitaa muuqaal cusub; dhanka kale, isbeddelada ayaa dib udhac ku noqon kara marka isdhexgalka la yaqaan si lama filaan ah u baaba'aan. Xiisaddan ayaa ugu weyn marka sheyga loo beddelo qaab riwaayad ah - aad u badan oo xitaa loogu yeeri karo wax soo saar cusub. Dugsiga CaseFleet waxaan ku baranay qaar ka mid ah casharradan dariiqa adag, inkasta oo
Axad, Agoosto 28, 2016 Jimco, Diisambar 15, 2017 Douglas Karr
Sanado kahor, waxaan ushaqeeyay shirkad dabagal ku sameysay wicitaankooda macaamiisha. Haddii mugooda wicitaankoodu kordho oo waqtiga wicitaan kasta la yareeyo, waxay u dabaaldegi lahaayeen guushooda. Dhibaatadu waxay ahayd inaysan ku guuleysan haba yaraatee. Wakiillada adeegga macaamiisha ayaa si fudud ula deg degay wicitaan kasta si maamulka looga ilaaliyo dhabarkooda. Natiijadu waxay noqotay macaamiil aad u careysan oo ku qasbay inay si isdaba joog ah u soo wacaan si ay u helaan xal. Hadaad